Ndị Mgbasaozi Enyela Obianọ Onyinye Nkwanye Ugwu
N'ihi ntụnye ya na ọtụtụ ọrụ ọma dị iche iche ọchịchị ya rụpụtagoro, otu jikọtara ndị mgbasa ozi na steeti Anambra enyela aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ onyinye nkwanye ugwu pụrụ iche.
Oke nkwanye ugwu ahụ bụ nke e nyere ya na nnukwu mmemme ndị otu ahụ chịkọbara n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ.
N'okwu ya na mmemme ahụ, gọvanọ Obianọ, nke osote ya bụ Dọkịnta Nkem Okeke nọchitere anya ya kọwara ndị ọrụ mgbasa ozi dịka ndụ na okuku ume nke ọchịchị onye kwuo uche ya maka na ọ bụ site na ha ka e si ama ebumnobi gọọmenti ọbụla n'ebe ndị ọ na-achị achị nọ, ma mekwa ka ndị ọnụ erughị n'okwu nwee ọnụ okwu. Ọ kpọpụtasịrị ọtụtụ ihe dị iche iche ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ mepụtagoro na steeti ahụ, ụzọ dị iche iche o sigoro nye ndị mgbasa ozi nkwàdo, na ụzọ o sigoro mee ka ndị mmadụ rite erere ọchịchị onye kwuo uche ya, ma kwekwazie nkwa inye ndị mgbasa ozi nkwado n'ihe dị iche iche ha na-eme iji mee ka ọrụ ọma ha pụtawanye ihè na steeti ahụ.
Ka ọ na-enye nkụzi na mmemme ahụ, onyeisi ọmụmụ ihe Social Sciences na mahadum Nnamdị Azikiwe dị n'Awka ma bụrụkwa onye ọrụ mgbasa ozi na-ewu ewu na mba ụwa, bụ ọkammụta Stella Ọkụnna kọwara ọgbakọ ahụ dịka nke magburu onwe ya, ọ kachasị ugbu a ndị ọrụ mgbasa ozi nwere ọrụ pụrụ iche chere ha n'iru n'ọchịchị ala anyị na ọnọdụ akụnụba ya. Ọ kọwara n'ebe o doro anya, ihe omimi dị iche iche mmadụ kwesiri ịma dịka onye ọrụ mgbasa ozi iji wee mee nke ọma dịka a tụrụ anya n'ọrụ ya, kwaa arịrị otu ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa si akpọdo ihe isi n'ala nakwa otu ụfọdụ ndị nwere ụlọ mgbasa ozi si eji ndị ọrụ ha ụgwọ ọnwa akwụghị akwụ, bụzị nke ọ sị na ọ na-ebutere ọrụ mgbasa ozi aha ọjọọ. Ọ kpọkuzịrị onye na onye ọbụla ka o hie asaa n'anya ma nyochaa onwe ya nke ọma hụ na o tozuru okè n'akụkụ niile tupuu ọ mapụta n'ọrụ mgbasa ozi.
Na mbụ n'ozi nnọọ ya, onyeisi oche otu jikọtara ndị mgbasa ozi na steeti ahụ, bụ maazị Emma Ifesinachi kelere gọvanọ Obianọ maka nkwàdo ya nyere ndị otu ha na steeti ahụ, ọ kachasị site n'ịkwụchapụ ụgwọ niile e ji ndị lagoro ezumike nka n'ụlọ ọrụ mbipụta akwụkwọ akụkọ National Light na Ụlọ mgbasa ozi ABS na ọtụtụ ihe ndị ọzọ o mepụtagooro ha, ma kpọkuzie ya ka o jide ka o ji, ọ bụnadị dịka o kwuru na ihe niile ahụ so n'ihe mere ha ji kpebie inye ya onyinye nkwanye ugwu ahụ.
N'ozi mmalite ya kwa, onyeisi oche na mmemme ahụ ma bụrụkwa kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na ọdịnala na steeti ahụ n'oge gara aga, bụ maazị Maja Ume kwuru na ndị ọrụ mgbasa ozi bụ nnọọ ndị nwere oke ọrụ a na-atụ anya n'aka ha n'ala anyị ugbu a n'ihi na ọ bụ naanị ha nwere ihe ọ ga-ewe iji kpụtọkọọ ma ọ bụ kwalite ọchịchị ọbụla batara n'ọgbọ.
Na ntụnye nke ya na mmemme ahụ, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka mgbasa ozi na ịkụziri ọhaneze ihe ha kwesiri ịma, bụ maazị C-Don Adịnụba kọwara Obianọ dịka ezi onye ọchịchị na-aña ndị ọrụ ya ntị oge niile, nwee mmetụta n'ọnọdụ ndị ọ na-achị, ma na-achịkwa ọchịchị ya n'ụzọ ọ ga-abara ọgbọ nọ ugbu a uru ma makwara ọgbọ na-abị n'ihu mma nke ukwuu. O kwuru na ọgbakọ ahụ na nkwanye ugwu ahụ bụ nke bịara na mgbe kwesiri ekwesi, ọ bụnadị dịka isi okwu ọgbakọ ahụ siri dị, n'ihi na ndị ọrụ mgbasa ozi bụ nnọọ ndị kachara nwee ọrụ pụtara ihe n'ịkwalite ezi ọchịchị na ọchịchị onye kwuo uche ya.
Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere onyeisi otu jikọtara ndị ọrụ mgbasa ozi n'ala anyị, bụ Alhaji Abdulahil Obdusule, nke onye nọchitere anya ya bụ maazị Chris Isiguzo; onyeisi mahadum Nnamdị Azikiwe, bụ Ọkammụta Eberendụ Ahaneku, bụkwa onye e nyere onyinye nkwanye ugwu na mmemme ahụ; Chiifu Victor Umeh, bụkwa onye e nyere onyinye nkwanye ugwu na mmemme ahụ dịka Nwoke Nke Ahọ a; onyeisi ụlọ mbipụta akwụkwọ akụkọ National Light na Ka Ọ Dị Taa, bụ Sa Chuka Nnabụife; Chiifu Osita Nweke, bụ onyeisi otu ahụ n'oge gara aga, tinyere imirikiti ndị ọzọ.